China Gbanwee Side View Mirror PK9780 Manufacturer and Supplier | West Bridge
PK9780 kwesịrị ekwesị maka usoro ISUZU NKP NHR.The ngwaahịa anyị na-eme dị ezigbo ọnụ-irè na àgwà nkwa. Ọ bụkwa anyị ga - ahụ n'anya ịnweta ntụkwasị obi gị karịa site na ịbatara gị iwu gị. anyị ụlọ ọrụ na-ewepụtara nwere kacha mma ahịa ọrụ na ngwaahịa ndị dị ka ị.
PK9780 kwesịrị ekwesị maka usoro ISUZU NKP NHR.The ngwaahịa anyị na-eme dị ezigbo ọnụ-irè na àgwà nkwa. Ọ bụkwa anyị ga - ahụ n'anya ịnweta ntụkwasị obi gị karịa site na ịbatara gị iwu gị. anyị ụlọ ọrụ na-ewepụtara nwere kasị mma ahịa ọrụ na ngwaahịa ndị dị ka gị. na afọ ndị gara aga, anyị na-etolite anyị enterprise omenala, ụlọ ọrụ na-chụpụrụ site doro anya nke uru na enterprise vision.We na-atụ anya gị ụdị ntị na ogologo Anyị na-eme ka ngwaahịa niile dị mma ma na-adịgide adịgide nye ndị ahịa anyị. na ihe karịrị afọ 10 nke mmepe, anyị aghọwo onye na-eduga soplaya na wholesaler nke dum gwongworo na akụkụ ahụ mapụtara nke SINOTRUK HOWO, STEYR, STEYR EZE, Ọlaedo isi wdg, na anyị nwere ike na-enye keukwu na-eje ozi na teknuzu alo. na ụkpụrụ a, ọtụtụ ndị ahịa na-aghọ ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe n'ọgbọ. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị sonyere ezinụlọ anyị.
Na-eme ISUZU NKP NHR series
OZI OEM 894262542
Nke gara aga: Mirror Side maka forgbọala PK9583
Osote: Mkpocha Akpa Side PK9440